Kunyange zvakadaro hauzive kuti chii chakagadzirwa musoro wekona?
Musoro weAngle chinowanzo shandiswa muchina turu chishongedzo. Mushure memusoro wekona wakaiswa pamushini chishandiso, iyo yekutenderera nzvimbo tambo yeiyo chishandiso inogona kutenderedzwa neicho chokurukisa kutenderera pakati mutsetse kugadzirisa iyo workpiece.
Performance maitiro uye mashandiro kuyerera kweiyo gantry yekugaya muchina
Gantry yekugaya muchina ine kuomarara kwakakwana, kushanda kwakanyanya, nyore kushanda, chimiro chisina kujeka, kuita kwakazara uye mamwe maitiro.
Kugadziriswa kweGantry yekugaya muchina
Gantry hwokugaya muchina gwaro gadziriso: muchina chishandiso gwaro rinonyanya kugadzirwa nesimbi kana kukanda simbi, rudzi urwu rwegwara kukwenya, kunofanirwa kugadziriswa, zvikasadaro ichaita kukwenya.
Nezve Gantry yekugaya michina
Gantry hwokugaya hwakabvira, pfupi kuti gantry azvikuya, ari musuo furemu uye refu yakatambarara mubhedha ari azvikuya muchina.
Maitiro ekuchengetedza gantry yekugaya muchina
Gantry hwokugaya hwakabvira muchina hwakawanda mamiriro ine gantry, gantry ine yakapetwa kaviri mbiru, danda, bridging danda, padenga danda, denga uye azvikuya musoro gondohwe vanoumba vanachandagwinyira mamiriro.